Maxaa Cusub – Page 42 – Shabakadda Amiirnuur
Koofur Galbeed oo 2 Gaaro Iyo Ciidan Ku Weysay Weerar Ka Dhacay Bakool.
Wararka ka imaanaya degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa ku waramaya in kamiin culus loo dhigay ciidamo katirsan maamulka Koonfur galbeed, kuwaas oo ku socdaalayay duleedka degmada Xudur. Ilo wareedyo aan ku kalsoonnahay waxay soo sheegayaan in kamiinka uu ahaa mid aad u culus, islamarkaana khasaare ba’an lagu gaarsiiyay […]
In Ka Badan 10 Xabashi Ah oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weeraro Ku Qabsaday Bay.
Todobaadkii labaad ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa la kulmaya weeraro culus oo kaga imaanaya dhanka ciidamada milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo dhacaya wadada xiriirisa Qansaxdheere iyo degmada Bardaale ee gobolka Baay. Warar lagu kalsoonyahay oo la helayo waxay tilmaamayaan in kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo kasoo baxay Qansaxdheere kuna sii […]
TRUMP MA ADEEGSAN KARAA AWOOD CIIDAN? (WQ:DR GARYARE)
Trump ayaa dhawaan ku hanjabay in uu adeegsan doono awood ciidan haddii ay xasaradaha iyo kacdoonka ka socda qaybo ka mid ah dalka Maraykanka ay sii socdaan. Haddaba waxa is weydiin leh Trump ma yahay mid si sharci u adeegsan kara ciidammada dalka marka ay noqoto gudaha Maraykanka? Jawaabtu waa […]
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Kacdoonada Ka Socda Mareykanka.
Sheekh Suldaan Aala-Muxamad Oo ka hadlay Dawada Cudurka Coronavirus.(Dhagayso)
Sheekh Suldaan Muxamad Aala-Muxamad oo kamid ah masuuliyiinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dersi uu jeedinayay wuxuu kusoo hadal qaaday cudurka Coronavirus iyo dawooyinka dabiiciga ah ee lagula tacaali karo. Sheekha ayaa sheegay in ugu horeyn loo baahanyahay in dadka ay Allaah u towbad keenaan, aadna loo badiyo bixinta sadaqada iyo […]
Ciidamada Al-Shabaab Oo Saacado Kooban Dagaal kula wareegay Balcad.
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in magaalada ay marti gelisay dagaal dhexmaray ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa Dowladda federaalka. Ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa labo kontorool oo ay askarta Dowladda federaalka kaga sugnaayeen Balcad ka weeraray, waxaana ciidamada Dowladda ay ka carareen degmada […]
Milliteriga Maraykanka Oo Dagaal toos ah kula jira Shacabkiisa.(Dhagayso Wararkii ugu dambeeyay(
Maraykanka waxaa ka soconaya bananabaxyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka dalkaas, kuwaas oo kasoo horjeeda tallaabo lagu dilay muwaadin madow Maraykan ah oo uu si xun u dilay sarkaal Booliis cadaan ah. Meelaha ugu badan ee ay banaanbaxyadu ka socdaan waa magaalada caasimadda ah ee Washington, Donald Trump ayaana ku […]
Soomaali Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay KoofurA frika.
Dalka Koofurafrika waxaa ka dhacay dil loo geystay qof soomaali ah habeenkii xalay. Qofkan oo ahaa ganacsade laguna magacaabi jira Maxamad ayaa lagu dilay magaalada beritoriya. Dilkiisa waxaa ka dambeeyay ciidamada Boliska oo si xun u jir dilay balse wuxuu u geeriyooday dhaawac soo gaaray. Boliska ayaa ku eedeeyay inuu […]
Al-Shabaab oo Duleedka Jowhar Ka Fuliyay Hawlgal Ay Askar Ku Dileen Hubna Ku Furteen.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidanka Hirshabelle u taallay meel u dhow magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa lagu dilay hal askari iyadoo lagu dhaawacay mid kale. Dowladda Federaalku waxay ka carartay meydka askariga laga dilay waxaana laga soo furtay […]
Dibadbax Looga Soo Horjeedo DF oo Ka Dhacay Balcad.
Degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa ka dhacay isku soo bax ballaaran oo looga soo hor jeedo xasuuqii ay ciidamada DF ka geysteen degaanka Gololeey. Dad badan oo isugu jira caruur, haween iyo rag islamarkaana aad u careysan ayaa buux dhaafiyay wadooyinka iyagoo ruxaya boorar ay ku xardhan yihiin […]